टिकटकबाट एक महिनामै एक करोड कमाई, अंशु बर्माको वास्तविकता के हो ? घर, घडेरी देखि कार सम्म भिडियो हेर्नुस् – Jagaran Nepal
टिकटकबाट एक महिनामै एक करोड कमाई, अंशु बर्माको वास्तविकता के हो ? घर, घडेरी देखि कार सम्म भिडियो हेर्नुस्
एउटा मोवाइल एप टिकटक जसवाट मानिसले लाखौं करोडौ कमाउन सक्छन् भन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ । एक दिनमै करिब एक लाख रुपैया कमाउने अंशु वर्माको कथाले पक्कै पनि तपाईलाई अचम्म बनाउन सक्ला । यिनी टिकटकमा लाइभ आएर लाखौं कमाउने गरेका हुन् । उनी कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरका हुन् । उनी आफ्नै घरको कोठामा बसेर दिनमै लाख भन्दा बढी कमाउँछन् ।
आफ्नै कोठामा बसेर उनले दुई महिनामै जिवनशैली परिवर्तन गरे । उनको कोठा पनि भब्य छ । घरमा सबै सुविधा जोडेका छन् । एसी देखि आवश्यक पर्ने सबै सुविधा जोडेका छन् । टिकटक लाइभ बस्न उनले लाइट पनि राखेका छन् । कोठा नै ब्यवसायीक बनाएका छन् । पैसा कमाएपछि उनले अलि अलि अरुलाई सहयोग पनि गर्न थालेका छन् । समाजसेवी पनि बन्नु पर्यो नी सेल्फिसको जमाना छैन नी, उनले भने ।
खान लाउन नपाएकाहरुलाई सहयोग गर्न पनि पुग्छन् उनी । आफुले गरेको सहयोग उनले टिकटकमा भने देखाउँदैनन् । उनले देखाएर समाजसेवा नगर्ने बताए ।